Global Voices teny Malagasy » Côte d’Ivoire : An-dàlana Ny Fanavaozana Tena Ilaina Ao Amin’ny Tafika · Global Voices teny Malagasy » Print
Côte d'Ivoire : An-dàlana Ny Fanavaozana Tena Ilaina Ao Amin'ny Tafika
Voadika ny 28 Febroary 2017 20:26 GMT 1	 · Mpanoratra Laurent Diawara Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Cote d'Ivoire, Ady & Fifandirana, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Pikasarin'ny toby miaramila ao Bouake, CIV
« Neken'ny tafika ny hiditra ao anaty trano fitobiana ary nitsahatra ny fitifirana », hoy ny loharano iray ao Bouake. Herinandro iray taorian'ny korontana tany afovoan-tànan'i Côte d'Ivoire, ny 6 sy 7 janoary, toa nahomby ny fifampiraharahana teo amin'ny fanjakana sy ireo miaramila. Tany aminà tànana maro tao amin'ny firenena, niteraka loza ireo miaramila ivoarianina, nanao fiti-danitra. Ny zavatra takian'izy ireo : ny fandoavana tambin-karama, fanondrotana ny karama ary fisondrotana laharana haingana kokoa. « Amafisiko ny fanekeko handinika ireo fitarainana mikasika ny fanampin-karama sy ny fanatsarana ny fepetra iainana ary ny asan'ny miaramila », hoy ny filoha ivoariana, Alassane Ouattara.
Hatramin'ny 2011, miverimberina foana ny resaka fitakiana ara-pitaovana ataon'ny tafika, hatramin'ny nivoahan'i Côte d'Ivoire tamina ady sivily sy fikomiana naharitra folo taona — fikomiana izay Bouake no renivohiny– . Nandovàn'ny tafika ivoariana fandrindràna efa lany andro tsy fampiasa intsony ankehitriny izany vanim-potoana izany.
Taorian'ny fikasana hanongam-panjakana tamin'ny 2002, lasa nizara roa i Côte d'Ivoire : ny fikomiana tany Avaratra, ny tafika mbola manompo ny filoha teo aloha, Laurent Gbagbo, tany Atsimo. Tsy manaiky ny fahareseny nandritra ny fifidianana filohampirenena tamin'ny 2010, nandentika ny firenena tao anatina krizy mahery setra ity farany, izay niafara tamin'ny fahafatesan'ny olona 3 000.
Mifandray amin'izany krizy nandritra ny folo taona izany, novàna anarana ho Tafika Mitam-piadiana ao Côte d'Ivoire (FACI ireo Tafika Repoblikanina ao Côte d'Ivoire (FRCI) nanomboka tamin'izany, ). Fiovàna anarana tongasoa, fa tsy ampy, ho azy irery, mba hanovàna ny tafika misy olona 22 000 eo ho eo, raha tsy isaina ireo zandary 19 000 ao amin'ny firenena. «Ny tafika Meksikana no mihinana ny tetibola », hoy ny miaramila iray efa misotro ronono, nanondro ny zava-misy hoe lehilahy mihoatra ny 12 000 no nampidirina tao amin'ny vondron-tafika taloha na taorian'ny krizy talohan'ny fifidianana 2010-2011.
Ary tamin'ny 2014 ireo miaramila dia nahazo karama tsaratsara kokoa sy fampivoarana fari-piainana taorian'ny fihetsiketsehana voalohany. Vokatr'ireny goragora ara-politika ireny, miisa tsy latsaky ny 14 000 ankehitriny ireo manamboninahitra lefitra ho an'ireo miaramila miisa 22 000 ao amin'ny FACI. Tsy fandanjalanjana maniratsira, rehefa fantatra fa eo anivon'ny tafika maoderina, ny manamboninahitra lefitra iray dia mila manara-maso olona efatra ary folo ny an'ny manamboninahitra iray.
Fepetra hafa noraisina tamin'ny taona 1990 no nitondra nankany amin'ny fahanteran'ny mpiasa. Nanimba ny foto-drafitrasa sy fitaovana miaramila ireo krizy nisesy nolalovan'ny firenena, nampalemy ny fitohizan'ny baiko, nampihena ny fahaiza-miasan'ny tafika mitam-piadiana ary nanova ny fanahin'ny andiany. Farany, ny Onuci, tafiky ny ONU, mipetraka nanomboka tamin'ny 2004, ary misy mpiasa miisa 10 000, dia miomana ny handao ny firenena amin'ny fahavaratry ny taona 2017. Fanamby maro izay mazava tsara ho an'ny fanjakan'i Alassane Ouattara, tamin'ny fanolorana volavolan-dàlana sahisahy ho fandrindràna ny tafika.
Lalàna fandrindràna sy « drafitra Marshall » vaovao ho an'ny tafika
Sambany tao Côte d'Ivoire, nolaniana tamin'ny 4 Janoary 2016 ilay lalàna fandrindràna ny tafika. Mandrakotra ny vanim-potoana 2016-2020, miresaka momba ny fanavaozana ny fiarovana ivoariana ilay lahatsoratra. Amin'ny farany, ny tanjona dia ny hampifanaraka ny tafika amin'ny zava-misy ankehitriny ao amin'ny firenena.
Notolorana fitaovana mifanaraka amin'ny tanjona kendrena ilay fandrindràna : tsy latsaky ny 2 000 lavitrisa CFA ( 3,8 miliara Euro) no ho soratana ao amin'ny tetibola ankehitriny ka hatramin'ny 2020. Ao anatin'ny fandaharanasa, ny fanavaozana sy ny fividianana fitaovana, fa indrindra ny fanavaozana ny isa. Raha toa, ankehitriny, ka ny 90% ny tetibola natokana ho an'ny tafika dia natokana ho an'ny fandoavana karama, momba ny ”fanatsongolohana ny piramida” izany, ho an'ny minisitry ny Fiarovana, Alain-Pierre Donwahi. Izany hoe, ahena ho vitsivitsy kokoa ireo mpifehy ny miaramila mitaha amin'ireo miaramila sahaniny.
Mba hamaliana ireo fangatahana farany nataon'ny miaramila, nandray fanapahankevitra maromaro manatsara ny toe-piainany sy nampiditra fitaovana azo antoka ny governemantan'i Ouattara. Nandray ny fangatahan'izy ireo ho tena matotra ny fahefana ivoariana, raha i Brono Nabagné Koné mpitondra tenin'ny fanjakana no inoana : « nniteny ireo fibaikoana ambony ao amin'ny tafika ny filoha mba hanomboka fihaonana amin'reo singa rehetra ao anatin'ny mpitandro filaminana ao amin'ny firenena mba hihatsaran'ny toe-piainan'izy ireo ». Ho aloa daholo ireo tambin-karama taloha, hoy ny minisitry ny Fiarovana.
Ho an'i Arthur Banga, mpikaroka matihanina misahana ny olana ara-piarovana, « misy ny ezaka ataon'ny fanjakana ivoariana amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana sy ny resaka ara-bolan'ireo miaramila, fa (…) tsy maintsy takarina ny sosiolojian'ireo izay manao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao. Miaramila taloha avy ao amin'ny FAFN no niaina fiakarana, ireo mahatsiaro ho nandray anjara mihoatra bebe kokoa noho ny hafa tamin'ny fahazoan'i Alassane Ouattara ny fahefana ary ankehitriny dia mahatsiaro tena ho toa ratsy valisoa raha ny karama no resahana (…) . Misy ireo lietnà-kolonely, kolonely nefa ny miaramila dia tsy niaina izany fiakarana izany ». Tena olana maro izay valian'ilay « lalàna vaovao fandrindràna ny tafika izay maniry sata vaovao fotsiny ho an'ireo miaramila vaovao, izay ho miaramila ambany fifanarahana asa », hoy ilay mpikaroka.
Raha mikasika ny fialàn'i Onuci, minisitry ny Fiarovana kosa, dia manome antoka i Alain-Pierre Donwahi fa natao daholo ny zavatra rehetra mba « handeha tsara ny fampitana fahaizamanao. Efa vonona tanteraka amin'izany izahay », tamin'ny famaritana fa niantoka « tam-pahombiazana » ny fandriampahalemana ny FACI nandritra ny fitsapankevibahoaka momba ny lalàm-panorenana natao tamin'ny volana Oktobra 2016.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/28/95803/